အိပ်ယာပေါ် မှာနှင်းဆီပန်းစည်းနဲ့surprise လုပ်ဖို့စောင့်နေတဲ့ချစ် ခင်ပွန်းကြောင့်အံ့အား သင့်ခဲ့ရတဲ့ သန္တာလှိုင် - Myannewsmedia
သန်တာလှိုငျကတော့ Model လောကမှာ Professional တဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျနတေဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ ကိုယျလုံးလေးကလညျး ကလေးမိခငျဖွဈနတောတောငျ သှယျလကြဈြလဈနေ ပွီး မွငျသူတိုငျးက အားကငြေးမောနရေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျး ခဈြရတဲ့ ခငျပှနျးနဲ့အတူ ကွညျနူးပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ အိမျထောငျရေးခရီးလမျးကို လြှောကျလှမျးနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
သန်တာလှိုငျဟာ လတျ တလောမှာ photo shooting တှေ ရိုကျနရေပွီး သူမရဲ့ Fitness app အတှကျလညျး စနဈတကလြကေ့ငျြ့ပုံတှကေို ဝိတျခခြငျြတဲ့ လူတှအေတှကျ လမျးညှနျပွသပေးနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ လှုပျရှားမှုတှတေိုငျးကိုလညျး ပရိသတျတှကေို အမွဲဝမြှေပေးနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး သန်တာလှိုငျရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ ပုံလေး တှေ တငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ အိပျယာပျေါမှာနှငျးဆီပနျးစညျးနဲ့surprise လုပျဖို့စောငျ့နတေဲ့ခဈြခငျပှနျးကွောငျ့အံ့အားသငျ့ခဲ့ရတဲ့ သန်တာလှိုငျရဲ့ ပုံရိပျလေးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
သူမကလညျး ” အခနျးထဲဝငျလာတော့ ကုတငျပျေါက သူ့ကို မွငျမွငျခငျြး ခေါငျးထဲဝငျလာတဲ့ အတှေးကsurprise တဈခါမှ မလုပျဘူးတဲ့ ငါ့ယောကျြားဘာဖွဈသှားတာလဲပေါ့ ??? ပါးစပျထဲ ကိုကျထားတဲ့ စာလေး ဖတျကွညျ့တော့မှ အဖွဈမှနျကို အဓိပ်ပါယျပေါကျသှားတယျ။ ” ဆိုပွီး ရေးသား ထားတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှေ အတှကျ ဒီသတငျးလေးကို တဈဆငျ့ ပွနျလညျကူးယူတငျဆကျပေး လိုကျ ရပါတယျနျော။
သန္တာလှိုင်ကေ တာ့ Model လောကမှာ Professional တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကလည်း ကလေးမိခင်ဖြစ်နေတာတောင် သွယ်လျကျစ်လစ်နေပြီး မြင်သူတိုင်းက အားကျငေးမောနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့အတူ ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာေ ကာင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သန္တာလှိုင်ဟာ လတ် တလောမှာ photo shooting တွေ ရိုက်နေရပြီး သူမရဲ့ Fitness app အတွက်လည်း စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပုံတွေကို ဝိတ်ချချင်တဲ့ လူတွေအတွက် လမ်းညွှန်ပြသပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေကို အမြဲဝေမျှပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း သန္တာလှိုင်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ပုံလေးတွေ တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အိပ်ယာပေါ်မှာနှင်းဆီပန်းစည်းနဲ့surprise လုပ်ဖို့စောင့်နေတဲ့ ချစ်ခင်ပွန်းကြောင့်အံ့အားသင့်ခဲ့ရတဲ့ သန္တာ လှိုင်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကလည်း ” အခန်းထဲဝင်လာတော့ ကုတင်ပေါ်က သူ့ကို မြင်မြင်ချင်း ခေါင်းထဲဝ င်လာတဲ့ အတွေးကsurprise တစ်ခါမှ မလုပ်ဘူးတဲ့ ငါ့ယောကျာ်းဘာဖြစ်သွားတာလဲပေါ့ ??? ပါးစပ်ထဲ ကိုက်ထားတဲ့ စာလေး ဖတ်ကြည့်ေ တာ့မှ အဖြစ်မှန်ကို အဓိပ္ပါယ်ပေါက်သွားတယ်။ ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအ တွက် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့် ပြန်လည်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
Previous post အင်္ဂလန်နို င်ငံရဲ့ Landmark Sto nehenge မှာရှိတဲ့ အံ့သြမင် သက်စရာ အရာေ တွကို ငေးမော ရင်း သဘာဝ တရားကြီးရဲ့ အလှကို ခံစားနေတဲ့ မိုးဟေကို
Next post စည်းချက် ညီညီ ခန္တာကိုယ်လေးကို လှုပ်ခါပြီး အသည်းယား စရာကောင်းအောင် ကပြနေတဲ့ မအေးသောင်းရဲ့ ဗီဒီယို